Taiwan: Tanimbary goavana teo ivelan’ny trano fiasàn’ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2010 7:24 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Español, English
Ny faha 18 Jolay, ho fanoherana ny Lalàna famerenana ny tany amin'ny fanjakana dia navadik'ireo tantsaha Taiwanese ho toy ny tanimbary midadasika ny lalambe migodana manoloana ny trano fiasàn'ny Filoha .
Tamin'ny 9 Jona, 20 ireo fiarabe mpanao asa vaventy/mpitrongy tany nalefa haka tanimbary efa ho 28 hektara tany Dapu Borough (大埔), vohitra tantsaha iray, mba hanaovana fanitarana ny Jhunan Science Park. Nandrenesana tantara fakàna tany toy izany koa avy any Houlong (後龍), Erlin (二林), Jhudong (竹東), Jhubei (竹北), ary ny tananan'i Tucheng (土城).
Tantsaha vitsivitsy sy mafana fo avy ao Dapu no nanabaribary fa tsy ara-dalàna ny fakàna ny tany ary nameno taratasy tao amin'ny Ministeran'ny Atitany [Ministry of the Interior (MOI)] mangataka ny hanafoana ny fanomezan-dàlana ny Governemantan'ny Tananan'i Miaoli haka ny tany ny 17 Jolay. Ny alina, nanao hetsi-panoherana nanoloana ny trano fiasàn'ny Filoha ry zareo, ary nanoloana ny zava-misy dia nirotsaka nanohana ny hetsika koa ireo mponina manodidina izay misedra olana mitovy avy amin'ny tananan'i Houlong Township (後龍), Miaoli County, Erlin Township (二林), Changhua County, Jhudong (竹東) Township sy Jhubei (竹北) City ao Hsinchu County ary Tucheng City (土城), Taipei County.
Taorian'ny fitokonana nandritry ny alina tontolo, manodidina ny 1.000 ioreo tantsaha sy mafana fo nandrakotra ny Lalamben'i Ketagalan tamina ketsa, namadika tanteraka ilay toerana ho lasa kianja maitso ary nampiseho tamin'ny vahoaka ny hakanton'ny asa fambolena.
Nalaina mivantana avy eny an-tanimbary ireo ketsa ireo.
Sary nampindramin'i Edd Jhong.
Nanomboka nikarakara ireo ketsa teo ivelan'ny tranoben'ny Filoha ireo tantsaha.
Voavadika ho kianja maitso ny Lalamben'i Ketagalan.
Ai-Wen Chen (陳藹文), mpanohana iray nirotsaka tamin'ilay fanoherana nandritry ny alina, dia nanazava ny antony nanohanany ilay hetsi-panoherana.
Rehefa nahita ireo fiara fanaovana asa vaventy nandadilady eraky ny tanimbary aho, dia natahotra fa mety ho indray andro any dia ny taniko koa no hiatrika horohoro mitovy amin'izao. Angamba mety hilazana aho hanome ny taniko, na tiako na tsy tiako, amin'ny anaran'ny ‘fivoarana.’ Tsy resa-bola ity. Heveriko fa tokony hifanaja isika.
Nanohana ny hetsi-panoherana nandritry ny alina aho ary natory tety amin'ny Lalamben'i Ketagalan. Rehefa avy niresaka tamin'ireo mpanao fihetiketsehana hafa, dia henoko fa tsy ny tanimbarin'ireto tantsaha ireto ihany, fa hatramin'ny tranon'ny olona sasany koa aza sy ireo tranobe nanan-tantara no noterena harodana noho ny resaka ‘metro’ (fiarandalamby mandeha any ambanin'ny tany any), resaka fiaran-dalamby haingam-pandeha, sy faritra indostrialy, sns. Amin'ny anaran'ny ‘fivoarana’ sy ny Lalàna famerenana ny tany amin'ny fanjakana, ny zavatra azonay atao dia ny tonga eto hanohitra. Rehefa mila manohitra mba hanehoana ny sy fankasitrahanay, very indray ny maha-olona anay.
Mahaliana anareo ve ny hiafaran'ireo ketsa rehetra ireo?
Ireo ketsa ireo dia nomen'ireo tantsaha anarana hoe ‘Ke-rice’ (mitovy fanonona amin'ny solon'anaran'ny Lalamben'i Ketagalan ihany ny fomba fanonona azy amin'ny teny Sinoa). Nongotana sy nafindrafindra novolena erak'ireo tanana manerana ny Nosy izy ireny ho sarin'ny boriborim-piainana tsy misy fiafaràny any ambanivohitr'i Taiwan.